Eyaziwayo F. Scott Fitzgerald Iingcaphuno
49 Andiyilibaleki F. F. Scott Fitzgerald Quotes
INew American American novelist
Ukuhlaziywa: 'iGatsby enkulu'
F. Scott Fitzgerald ungumlobi waseMelika, owaziwayo ngemisebenzi efana ne -Great Gatsby kunye neTender yi-Night -along kunye nezinye iincwadi kunye namafutshane ambalwa. Nazi izicatshulwa ezimbalwa ebomini nasemisebenzini kaFc Scott Fitzgerald.
"Impumelelo enkulu yentlalo yintombazana enhle edlala amakhadi akhe ngokucophelela njengokungathi ibonakala.
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, ngo-Nov. 18, 1938
- F. Scott Fitzgerald, Amanqaku eTycoon yokugqibela
"Ukupapashwa kuyintambo, njengamafilimu kunye ne-shishini lomrhweba. Awukwazi ukunyaniseka ngaphandle kokuvuma ukuba inxaxheba eyakhayo ebantwini ayinanto."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, uAgasti 24, 1940
Emva kwakho konke, ubomi abukwazi ukunikela ngaphandle kolutsha, kwaye ndicinga ukuba abantu abadala, uthando lolutsha kwabanye. "
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kumzala wakhe uCici
"Yonke into ebhalelekileyo ibhukuda phantsi kwamanzi kwaye ibambe umoya wakho."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe
"Ubomi buphela nje ukunyuka, kwaye ke ukukhula kwemali, enye ibinzana -" Ndiyakuthanda. ""
- F. Scott Fitzgerald, "I-Offshore Pirate"
"Ingcamango yabuyela emuva yaya phambili entloko yakhe njengendoda eyimfama eyabhonkcelayo kwintenitshala eqinile."
- F. Scott Fitzgerald, iiNcwadana
"Naluphi na umlinganiselo, masikuthande ixesha elithile, unyaka okanye kunjalo, wena kunye nami. Leyo ifom yobunxila bukaThixo esinokuzama ukuyisebenzisa."
- F. Scott Fitzgerald, "IDayimani ibanzi njengeRitz"
"Eyeshumi elinesibhozo ukukholelwa kwethu yiintaba esibheke kuzo; emashumi mane anesihlanu ziyimingcwaba esiyifihla kuyo."
- F. Scott Fitzgerald, "uBernice Bobs Inwele Zakhe"
"Ubuninzi bengeyona imveliso yokuphela, kuyafana nokuqala kwimeko yobomi kunye nobugcisa. Ufanele uhambe okanye udlulile okanye ngokugqithiseleyo, njengokuba usebenzisa isihlunu, ngaphambi kokuba umkhiqizo ocacileyo uphuma."
- F. Scott Fitzgerald, U-Crack-Up
"Iqonga: okokuqala intombazana ibonakala inxila kuluntu."
Nokuba ucinga-okanye abanye kufuneka bacinge ngako kwaye bathathe amandla kuwe, baphambuke baze baqeqekele izinto zakho zemvelo, bazenzele kwaye bakunciphe. "
- F. Scott Fitzgerald, Itender Night
"Wonke umntu uzikhumbuza ubuncinane ubuncinane besinye seziqhamo ezikhawulayo."
- F. Scott Fitzgerald, i -Great Gatsby
"Ulutsha loluntu luphupha, uhlobo lwamahlanya emichiza."
"Ulwahlulo lwentsapho luyinto ebuhlungu." Ayihambi njengayiphi na imimiselo, ayifani neentsimbi okanye amanxeba; zifana nokuqhekeka kwesikhumba ezingayi kuphulukisa ngenxa yokuba akukho zinto ezaneleyo. "
- F. Scott Fitzgerald, "I-Notebook O," I-Crack-Up
"IFransi yayingumhlaba, iNgilani yayingabantu, kodwa iMelika, enokuba nayo ingumgangatho waloo mbono, yayinzima ukuthetha-yayingumangcwaba eShilo kunye nokudiniweyo, ukukhwabanisa, ubuso beentlonelo zamadoda akhe amakhulu, kwaye ilizwe lalingumfana ofa eArgonne ngenqaku elingenanto ngaphambi kokuba imizimba yabo ibume.
- F. Scott Fitzgerald, "AbaShukumi," ngoMgqibelo Wobusuku , ngo-Oktobha 19, 1929
"UGenius uyajikeleza ihlabathi ebusheni bakhe ngokungapheliyo ukuxolisa ngenxa yokuba neenyawo ezinkulu. Yimangaliswa ukuba emva koko ebomini kufanele ukuba bathambekele ekuphakanyiseni iinyawo ngokukhawuleza kwizithutha kunye nemigodi."
"Ngaba i-Hollywood ayiyilahla-ngqondweni yomntu welizwi. Idolophu efihlakeleyo, ibhekiswe ngegadi ezihlambalazo ezizityebi, ezigcwele umoya womntu kwindawo entsha yokuhlambuluka."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi, uJulayi 29, 1940
"Kwiminyaka yesithathu efuna ukuba ngabahlobo bethu. Kwiimingxuma siyazi ukuba abayi kusisindisa ngaphezu kokuthanda."
"Kubuhlungu ukufumanisa okudlulileyo kwakhona kwaye uyifumaneke ngokwaneleyo okwangoku kunokuba kungabi nakuwe kwaye uhlale unomxholo wokubambisana wememori."
- F. Scott Fitzgerald, "Bonisa uMnu noNksk F. kuNombolo-"
"Kwamthatha umzuzwana ukuphendula ubumnandi obungaphethiyo bokumomotheka kwakhe, umzimba wakhe ubalwe kwi-millimeter ukubonisa ukuba i-bud iqinisekisa iindiza."
"Makhe ndikuxelele ngotyebileyo, bahluke kuwe nakwam." Bahlala kwaye banandipha ngokukhawuleza, kwaye benza okuthile kubo, kubenza bathambile apho sinobunzima khona, kunye neengcamango apho sithemba khona, ngendlela , ngaphandle kokuba uzalwe ucebile, kunzima kakhulu ukuyiqonda. Bacinga, ezinzulu ezintliziyweni zabo, ukuba bangcono kunathi kuba kufuneka sifumene iimbuyekezo kunye neendawo zokuphucula ubomi. ihlabathi okanye iyancipha phantsi kwethu, bacinga ukuba bangcono kunathi.
- F. Scott Fitzgerald, "I-Rich Boy"
"Amadoda abe ngumxube wendlela ekhangayo yabasetyhini ababaziyo."
"Ininzi, thina ababhali kufuneka sibuyele thina-yinyaniso. Sinamava amabini okanye amathathu ahamba phambili ebomini bethu-amava amaninzi kwaye ashukumisa ukuba angabonakali ngexesha apho kukho nabani na umntu oye wabanjwa kwaye wahlutha yaqhaqhaqhazela kwaye yamangaliswa yatshitshiswa kwaye yaphulwa kwaye yahlangulwa kwaye yakhanyiswa kwaye yavuzwa kwaye yahlanjiswa ngaloo ndlela ngaphambili. "
- F. Scott Fitzgerald, "Omnye Obuxoki Bokuqala," ngoMgqibelo Wobusuku , ngoMatshi 4, 1933
Nazi izicatshulwa ezivela ebomini nasemisebenzini kaFc Scott Fitzgerald.
Uninzi olungakumbi F. Scott Fitzgerald Quotes
26. "Akukho nxalenye yomlilo okanye intsholongwane inokumelana nomngeni into enokuyigcina yintliziyo yakhe."
27. "Akukho mbono omkhulu owake wazalwa kwinkomfa, kodwa ezininzi iingcinga zobuwula zafela khona."
- F. Scott Fitzgerald Iincwadi
28. "Akukho nto ifanelekileyo njengenye inhlanhla yabantu"
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, uSept 19, 1938
29. "Ngokuphindaphindiweyo ndicinga ukuba ukubhala kukugqithiseleyo ukushiya rhoqo into into encinci, ibenzi, incinci."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, kuMatshi 27, 1940
30. "Ithemba linomxholo wamadoda amancinci ezindaweni eziphakamileyo."
31. "Abantu bazama kakhulu ukukholelwa kwiinqununu ngoku, bebuhlungu kakhulu. Kodwa asikho kungekudala sifumane umguquli ohloniphekileyo okanye upolitiki okanye ijoni okanye umbhali okanye ifilosofi - iRovelvelt, iTolstoi, i-Wood, i-Shaw, i-Nietzsche, kunokuba Inkosi yam, akukho mntu unako ukuma udumo kule mihla.Iyindlela eqinisekileyo yokungcola. Abantu bayagula ukuva igama elifanayo ngokugqithiseleyo. "
- F. Scott Fitzgerald, Le Nxalenye yeParadesi
32. "Ubuntu luluhlu olungapheliyo lwezinto eziphumelelayo."
UScott Fitzgerald, i -Great Gatsby
33. "Inkondlo yinto ethile ehlala njengomlilo ngaphakathi kwakho-njengomculo kumculi okanye uMarxism kwiKomanisi-okanye kungenjalo, i-formalized engabonakaliyo ijikeleze ukuba zeziphi izigulana ezingadlala iinqwelo kunye neenkcazo zazo ngokungapheliyo."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, uAg.
34. "Ubuncwane abuzange bunqwenele, ngaphandle kokudibanisa nentlabo enkulu okanye ukuhlukana."
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya ku- Ernest Hemingway , ngo-Agasti 1936
35. "Ndibonise iqhawe kwaye ndiza kukubhalela inhlekelele."
36. "Ngoko ke sibetha, iinqanawa ezibhekiselele ngoku, zibuyiselwa emva kwangaphambili."
37. "Ngamanye amaxesha kunzima ukuzithintela intlungu ngaphezu kokuzonwabisa."
- F. Scott Fitzgerald, Ithenda yiNtetho yoBusuku yilungiselelo lamanqaku alisoze adlala kwakhona. "
38. "Imbuyekezo yempumelelo yangaphambili yinto enobungqina bokuba ubomi buyintando yothando.
- F. Scott Fitzgerald, waseMelika Cavalcade , ngo-Oktobha 1937
39. "Indlela elula yokufumana idumela ukuphuma ngaphandle kwendoda, umemeza iminyaka embalwa nje ngokuba unobundlobongela obunobundlobongela okanye unobungozi obunobungozi, uze uqhubekele kwindawo yokukhusela."
- F. Scott Fitzgerald, iiNcwadana Ubuso babantu abaninzi baseMerika abangaphezu kwemashumi mathathu ziimephu zokuphumula zokungonwabi. "
- F. Scott Fitzgerald, incwadi eya kwintombi yakhe, ngo-Okthoba 5, 1940
40. "Ingcamango yokuba ukwenza indoda isebenze kufuneka ubeke igolide phambi kwamehlo akhe kukukhula, kungekhona i-axiom.
Senze oko ixesha elide kangangokuba sikhohliwe nayiphi na enye indlela. "
41. "Ubusiso buvela xa i-reptile yamadoda yokuqala inqamle i-reptile yeyokuqala, isichazela ngendlela ekhohlakeleyo, eyayiyincomekayo yokuba yayisondlo njengento encinci yayisidla isidlo sasibusuku."
42. "Indoda efika esemncinini ikholelwa ukuba iyayenza intando yakhe kuba inkwenkwezi yakhe iya kukhanya. Indoda eyazibonakalisa kwimizuzu engamashumi amathathu inomqondo olinganiselayo wento yokunika amandla kunye nesimo esiza kusinikwa ngamnye, lowo ufika apho emashumi amane ukugxininisa kwintando yodwa. "
43. "Uvavanyo lwezinga lobuchule bokuqala lukwazi ukubamba iingcamango ezimbini ezichasene nengqondo ngexesha elifanayo, kwaye zihlala zikwazi ukusebenza."
UScott Fitzgerald, u -Crack Up
44. "Umnqobi ungowokuphanga."
- F. Scott Fitzgerald, Omhle kunye noMonakalo
45. "Iminyaka emashumi emashumi mathathu anesihlanu anamashumi mathandathu anesihlanu ehamba phambili ngaphambi kwengqondo engacacanga njengento engachazwanga, edidekayo-ehambayo. Okokuqala kwimbala ye-pastel, ngoko-grey grays kunye ne-browns, kodwa i-perplexing kunye ne-intolerably dizzy into, njengokuba kwakungakaze kube yinto evuyayo-yokuhamba ngokubuntwaneni okanye ebusheni; yolutsha. Kuba abaninzi amadoda namabhinqa kule minyaka engamashumi amathathu bathatyathwa ngokugqithiswa ngokukhawuleza ebomini. "
- F. Scott Fitzgerald, "O Witcher Witch!"
46. ​​"Kwaye kwakukho iintlobo ezimbini zokubanga, okokuqala xa intombazana ibanga kwaye ishiya indawo, okwesibini, xa ixakile. Wambanga intombazana, wonke umntu wayesazi ukuba wayehamba naye. Ukuba uMnu Jones ka-1919 uyaqhayisa umntu ofanayo uyazi ukuba akakwazi ukumanga kwakhona. "
47. "Xa umlobi wokuqala efuna i heroine okanye isantya esithandekayo, ufumanisa ukuba zonke izinto ezigqwesileyo ziye zagqithwa ngabantu abangaphantsi. Kumele kube ngumgaqo wokuba ababhali ababi baqale ngama-heroines aqhelekileyo kunye neentsasa eziqhelekileyo, kwaye , ukuba bayakwazi, basebenze into engcono. "
48. "Ababhali abayena abantu ngokuthe ngqo, okanye, ukuba bayayilungileyo, baninzi abantu abazama kanzima ukuba ngumntu oyedwa.
Banjengabalingisi, abazama ukukhangela izibuko. Abaxhomekeke ngasemva bazama ukujonga ubuso babo kwi-candlelight. "
- F. Scott Fitzgerald, I-Tycoon Yokugqibela
49. "Unokubetha abantu ngamagama."
Iimpawu eziMnandi ezithandekayo kwi-Wit nobulumko
Iingxelo ze-12 zoLuku loTitshala
Uyenza njani kwaye Uphule iNtaba?
Phezulu 'Ii-80 zeengoma zeCure
IYunivesithi yaseDallas Admissions
Ukusebenzisa i-'Estar '
I-PGA Tour ye-National Tournament
Ngaba i-Kia Soul i-Car okanye i-SUV?